Funda iJiology: Amanqaku, umdla kunye neenkcazo ezineenkcukacha | Meteorology yenethiwekhi
Kolu luhlu siza kuthetha ngezihloko ezahlukeneyo malunga umhlaba weplanethi yomhlaba. Siza kufunda ngeenkqubo ezahlukeneyo zejoloji ezenzeka kumacala angaphakathi oMhlaba nangaphandle. Umphezulu womhlaba uxhomekeke kwizenzo zeejoloji ezahlukeneyo esiza kufunda ngazo. Ukongeza, uya kuba nakho ukwazi iintlobo zamatye akhoyo, ukuba zenziwe njani kunye nokuhlelwa okupheleleyo.
Ngokuqinisekileyo unamathele kumanqaku akho avela kwiziko / eyunivesithi kwaye kufuneka utyhale kancinci ukucacisa amathandabuzo onawo. Kumanqaku esiwapapashayo sihlala sizama ukucacisa izinto ngeyona ndlela icacileyo, elula necacileyo. Le yindlela ulwazi olugcinwe ngayo ngcono kwaye ungafunda ngakumbi ngeplanethi yethu kunye nejoloji yayo.
Yokwakheka komhlaba Yisayensi ejongene nokufunda kungekuphela nje imvelaphi, kodwa kunye nokuvela koMhlaba, ulwakhiwo lwangaphakathi nolwangaphandle kunye nazo zonke iinkqubo ezenziwayo. Yisayensi enomdla kakhulu kuba ungalazi kakuhle ilizwe ohlala kulo kunye nendlela eyakhiwe ngayo. Unokufunda nangezinto ongenakuzibona ngamehlo akho, ezinje ngolwakhiwo lwangaphakathi loMhlaba kunye nokuma kwawo.
Kuwo onke amanqaku akolu luhlu kufuneka uwaqwalasele ngamaxesha onke Ixesha lejoloji. Ngale ndlela unokuba nombono ongcono wexesha elidlulayo ukuze iplanethi yethu yenze xa kuthelekiswa nomgangatho wobomi bomntu.
Ndiyathemba ukuba ungalivuyela inqaku ngalinye nenqaku esilipapashayo kweli candelo kwaye sinokukunceda kangangoko ukuze igeology sisayensi eyonwabisayo.
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Iveki e-1 .
Phakathi kwezona ndawo zingumqwebedu wendalo kunye nokuhlwempuzeka kweentlobo ngeentlobo zezinto eziphilayo kwesi sijikelezi-langa sineentlango. Kukho iintlobo ezininzi zeentlango kunye ...
Kuba kukho inani elikhulu leentaba-mlilo ezisebenzayo emhlabeni, kunokwenzeka ukuba enye yazo ilandele…
Iintaba-mlilo ziziganeko zendalo ezenzekayo xa i-magma evela ngaphakathi eMhlabeni ifikelela kumphezulu….
Eyona milambo inamandla ehlabathini
Imilambo ibisoloko ingumthombo osisiseko wobomi kuphuhliso lomntu, njengoko kungqinwa yinto yokuba...
Sonke sibona iintaba kwindawo yethu imihla ngemihla. Nangona kunjalo, abanye abantu abazi ukuba yintoni intaba ...
Kutheni kukho iinyikima zomhlaba ezininzi kangaka eGranada?
IGranada liphondo apho iinyikima ezininzi zenzeka rhoqo. Nangona zingekho phezulu kakhulu kwaye ziyingozi iinyikima,…
indlela okwakhiwa ngayo iilwandle
Ukutyhubela imbali, abantu bebezibuza ukuba zenziwa njani iilwandlekazi. Ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX, kwakukholelwa ukuba…
Kwiplanethi yethu kukho iindlela ezahlukeneyo zokuma komhlaba ezineempawu ezizodwa ngokuxhomekeke kwimvelaphi yazo, i-morphology, uhlobo lomhlaba, njl.
Iintaba-mlilo zezinye zeendlela ezinomtsalane zejoloji, nangona ugqabhuko-dubulo lwazo ngamanye amaxesha lunokubeka…
Amatye eMetamorphic liqela lamatye aye abunjwa bubukho bezinye izinto ngaphakathi...
por IsiJamani sasePortillo yenzayo Iinyanga ze4 .
Ngenxa yemvelaphi yayo yesiNahuatl, igama layo lithetha "intaba etshayayo", ngenxa yokuphakama kwayo yeyona ncopho iphakamileyo eMexico emva...